Global Voices teny Malagasy · 17 Jolay 2017
17 Jolay 2017
Tantara tamin'ny 17 Jolay 2017
Kenya-Congo (RDC): Miainga Avy Amin'ny Mponina Ao An-toerana Ny Fiarovana Ny Tontolo Iainana
Kenyà17 Jolay 2017
Mifototra amin'ny vahoaka izay mipetraka manodidina na ao anatin'ny faritra voaaro ny politika fiarovana ny tontolo iainana. Nanita-kevitra tamin'ity tanjona manaraka ity ny mpiaro ny tontolo iainana dia ny fanentanana sy ny fampandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana izay mipetraka manodidina ny faritra voaaro.
Niteraka Resaka Heloka An-tserasera sy Sazy Ny Tsaho Niely Fa Nirodana Ny Tonelina Ambanidia
Afrika Mainty17 Jolay 2017
Nosamborin'ny polisy tao Madagasikara ny lehilahy iray ahiahiana fa nizara "vaovao diso" tao amin'ny Facebook momba ny firodanan'ny tonelina
Azia Atsinanana17 Jolay 2017
Kolombia17 Jolay 2017
Rosia: Ilay Mpandeha Tsy Nanana Tapakila
Eoropa Afovoany & Atsinanana17 Jolay 2017
Ao Moskoa, azo vidiana any amin'ny mpamily 25 robla izay mitovitovy amin'ny 1$ ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka/trolleybus/tram . Mahazo fihenam-bidy ianao raha toa ka mividy ny tapakilanao eny amin'ny fivarotana manokana. Kanefa aleon'ny olona sasany manao hosoka sy mitaingina maimaim-poana. Fantatra amin'ny anarana hoe zayats amin'ny Rosiana: izany...